एमसीसी सम्झौता खारेज गराउनै पर्छ, नेपालमा अब भारतीय विस्तारवादको दादागिरी चल्दैन : महासचिव किरण – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
एमसीसी सम्झौता खारेज गराउनै पर्छ, नेपालमा अब भारतीय विस्तारवादको दादागिरी चल्दैन : महासचिव किरण
प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ २४
सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले कसरी लिएको छ ?
एमसीसीको खास विरोध गर्नुको कारण चाहिं के हो ? संसदबाट पास भयो भने नेपालमा यसको के कस्तो प्रभाव पर्छ ?
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सांसद सदस्यहरुलाई के आव्हान गर्नुहुन्छ ?
सुगौली सन्धिले महाकालीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । २०१८ सालमा गरिएको जनगणना, ०१५ सालको चुनावमा भोट हालेको, नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद लगायतका प्रमाणहरुले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । तर भारतीयहरुले भने लिम्पियाधुरा कुटियाङ्दी हुँदै आएको नदीलाई काली नदी नभनेर लिपुलेकदेखि तल कालापानीको छेउको सानो खोल्सोलाई ‘काली नदी’ भनेर भ्रामक प्रचार र दावी गरिरहेका छन् । भारतीयहरुको दावी सीमा तथा नक्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डविपरीत छ । यो खोल्सोले सीमा तथा नक्सासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैन । विगतका सरकारले गल्ती गर्दा कालापानीमा भारतले अड्डा जमाउन सफल भयो । चीनसँगको युद्धमा ती क्षेत्रमा भारतीय पोष्ट राख्न दिएर गुन लगाएको नेपाललाई उल्टै नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले बैगुनी काम ग¥यो । यो भारतको हददर्जाको अनैतिकता हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा ठूलो सानो देश भन्ने हुँदैन । सबै देशको हैसियत बराबर हुन्छ ।
भारतले वार्तामार्फत् सीमा विवाद सुल्झाउन बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सरकारले के के गर्न जरुरी छ ?
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कुटनीतिक वार्ता भनेर मात्र हुँदैन । सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नु ठिकै छ । तर त्यसमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।
चीनले लिपुलेक सम्झौतामा गल्ती गरेकै हो । त्यो गल्ती उसले सच्याउनु पर्दछ । चीनले त्यो गल्ती सच्याउने लक्षण पनि देखाइसकेको छ । तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले चीनसँग स्पष्ट रुपमा ठोस पहल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
हो, यो विषय पनि उठाउनै पर्दछ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले अध्ययन गरेर तयार पारेको इपिजीको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसमा के कस्ता विषयहरु समेटिएका छन् भन्ने विषय जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन नै बुझ्न नमानेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यो त भारतको दादागिरी नै भयो । अब भारतको यस्तो दादागिरी चल्दैन । भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनै पर्दछ । अहिले सत्तारुढ हुन पुगेका धेरै नेताहरुले पनि हिजो यही मुद्दा उठाएर सडकमा संघर्ष गरेकै हुन् । सडकमा छँदा यही मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने, सरकारमा गएपछि त्यही विस्तारवादी शासकहरुको चाकडी गर्ने कुरा गलत छ । त्यो प्रवृत्तिको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ ।
–कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी प्रयास अपुग र असफल भइरहेको सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी लगायतका पक्षहरुलाई समेतलाई समेटी उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी रहेको कुरा हामीले उठाएका हौं । उद्दारको विषयमा केही पहल भएको भए पनि राहतको विषयमा सरकार पूरै उदासिन बनेको छ । राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भने पनि सरकारले ठोस रुपमा त्यो घोषणा गरेन र थोरै मात्रामा गरिएको राहत वितरण पनि वास्तविक पीडित वर्गमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ । महामारीका कारण बेरोजगारीको समस्या निकै नै गम्भिर बनेको छ । देशभित्र र विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुसमेत गर्दा ठूलो संख्यामा बेरोजगारहरुको उपस्थिति बढ्ने देखिन्छ । तर बेरोजगार समस्या व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन र कुनै तयारी गरेको पनि देखिन्न । सरकारले पीडितलाई खानपुग्ने गरी राहत र बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टाइनहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र पीसीआर परीक्षणको दायरालाई पनि बढाउन जरुरी छ ।
जेरुसेलममा १० मेमा इजरायली प्रहरीले अन्धाधुन्द...